‘Wuxuu ii sheegay inuu aad u Jecel yahay ka cayaarista weerarka ‘: Maamulaha Chelsea Maurizio Sarri oo ka Maar-maya Giroud iyo Morata – Gool FM
‘Wuxuu ii sheegay inuu aad u Jecel yahay ka cayaarista weerarka ‘: Maamulaha Chelsea Maurizio Sarri oo ka Maar-maya Giroud iyo Morata
CR Shariif December 21, 2018
( London ) 21 Dis 2018. Eden Hazard ayaa u sheegay Maurizio Sarri inuu ku faraxsan yahay kasii cayaarista weerarka dhexe ee kooxda Chelsea xilli ay ku raad joogaan weeraryahan.
Hazard ma uusan aheyn mid diirada saarayay weerarka hore inuu ka dheel xagaagii tagay kolkaa uu kooxda leylinayay Antonio Conte.
Taa badalkeed ninka heerka caalami ee dalka Belgian ayaa doorbidaya inuu wax ka badan ka dheelo weerarka toos ka ah laakiin macalinka cusub ee Chelsea ayaa u cadeeyay isaga taa madaama uu weerarka kaliya dheelsiiyay labadii dheel ee lasoo dhaafay Premier League.
“Wuxuu ii sheegay inuu jecel yahay inuu halkaa ka cayaaro,” ayuu yiri Sarri. ‘Maanan joogin xilli ciyaareedkii hore, sidaasi darteed ma aqaano sababta uu Eden u sheegay dadkaan. Xilligan, wuxuu jecel yahay inuu weerarka toos cayaaro.
“Ma ahan booska ugu fiican Hazard. Hazard waa ciyaaryahan cajiib ah oo leh heer aad u sarreeya. Waxa uu u baahan yahay inuu xor u ahaado garoonka dhexdiisa. Laakiin waxaan u baahannahay heer aad u sarreeya. ”
“Waxaan ku soo bilaabanay labadii kulan ee ugu dambeysay ee Eden Hazard oo weeraryahan ah,” ayuu yiri Sarri. ‘Kulankii ugu horeeyay waxa uu ahaa kaliya xulasho xeelad ah. Dabadeed waxaan rabay inaan arko in xalkan ku shaqayn karo xaalado kale ama aan ahayn.
Unai Emery oo ka hadlay wararka xanta ah ee ku aadan mustaqbalka Mesut Ozil ee kooxda Arsenal
Shaxda rasmiga ah kulanka Premier League ee kooxaha Wolves Vs Liverpool